Kodzero-dzevanhu, 31 Zvita 2012
MDC-T Yokwenenzvera Gadziriro yeSarudzo
Munyori anoronga misangano muMDC-T, VaNelson Chamisa, vanoti vatopedza kusarudza zvikwata zvevanhu zvinenge zvichitungamira kusarudzwa kwevachamiririra bato.
Ongororo Itsva Inoti Vakawanda Havadi Bumbiro Rinonyorwa neHurumende
Imwe ongororo yakaitwa nechimwe chikoro chepamusoro chekuIndia inoratidza kuti veruzhinji muZimbabwe havasi kufarira chirongwa chekunyorwa kwebumbiro idzva remitemo chiri kutungamirwa nehurumende yakaisa paramende pamberi.
ZUJ Yokumbira Kuvhota Sarudzo Dzisati Dzaitwa
Sangano revatori venhau, reZimbabwe Union of Journalists, rinoti riri kukumbira komisheni inoona nezvesarudzo kuti ibvumidze vatori venhau kuvhota musarudzo mazuva esarudzo dzacho asati asvika.
Apo Zimbabwe yotarisana nesarudzo dzakakosha dzegore rinouya, vamwe munyika vave kukurudzira nyaya yekuti mapato anopikisana neZanu-PF abatane kana achida kukunda musarudzo.
Nhengo dzeAnglican Church Dzinopemberera Kuberekwa kwaJesu
Bishop Chad Gandiya vanoti vari kufara zvikuru nekukwanisa kucherechedza pamwe nekupemberera kisimusi vari muchechi yavo.
Madhokotera Anodarika Mazana Mana Anodzingwa Basa, Mitumbi Ichiorera Mumamochari
Zimbabwe Inocherechedza Kusiya Basa kwaVaMugabe Makore Maviri Apfuura
Sangano reCitizens Initiative Robatsira Vanoshaya muZimbabwe
EU Inobatsira Zimbabwe neMamiriyoni Makumi Manomwe eMadhora